Ngebuhle nebubi ukuqasha yomthengi ezezimali imali
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Ngebuhle nebubi ukuqasha yomthengi ezezimali imali
Njengoba indawo ukuboleka imali, kukhona ukuthi indlela ukusebenzisa ezezimali umthengi ngaphandle amabhange. Ngisho nasezikhathini
CM futhi umagazini ukukhangisa ensimini, ngikubonile igama lenkampani, kumele abantu futhi eziningi.
Ngakho, ingabe unaso ndawonye lokho izinto emihle nemibi ukuboleka imali ku ezezimali umthengi?
umthengi ezezimali ngezinzuzo usebenzisa ezezimali umthengi, noma ngaphambili eyayaziwa Sarah igolide, ukuthi wekhono ubuciko noma ukubizwa ngokuthi Machikin.
manje, noma abasemaqenjini ebhange, phezulu kulula ukuyisebenzisa futhi kungase kungahambisani isicelo i-Internet, abantu abaningi njengomuntu onekhono enokwethenjelwa ngezikhathi zokuhlupheka art ngeke isicelo kwemali.
2 okukodwa kokulandelayo ukuze izinzuzo usebenzisa ezezimali enjalo umthengi uzobe ekhonjiwe.
kungaba abhekane ngokuphumelelayo nesitha sakhe inqolobane okungazelelwe ngezindleko isivinini
Eyokuqala ukuthi ashiwo kukhona njengoba izinzuzo
umthengi ezezimali iyona ukulondoloza isikhashana isivinini. Emfushane evela
isicelo, ngakho ungakwazi ukuqedela luhlolo ngemizuzu engaba ngu-30 kuya ku-1 ihora, okwenza kube lula futhi iyatholakala uma esiphuthumayo.
Yilokhu isibe zingenzeka obhekwe imishini unmanned loan. Ngisho noma kungekho esitolo eduze
, wena kokubhalisa luhlolo usebenzisa unmanned imishini loan elise ezizungeze idolobha.
lapha, emva ugcwalisa amaphepha adingekayo, kodwa kufanele nabo eyenziwa luhlolo ngomkhonto ocingweni nomuntu ophethe, ngaleso sikhathi futhi akuthathi imizuzu engu-30.
Muva nje, futhi ine ziyanda izinkampani nokubhalisa kwemali kusuka ezifana amafoni smart. Kuphela ukufeza ukungena
usuku lokuzalwa kanye endaweni yokusebenza futhi ingenisa malini, le engenziwa kalula abukeze isicelo ngokugula izinzuzo. Imibhalo ukuthi ziyadingeka emva luhlolo
isidlulile, ngaphezu ngokuthumela emishinini inkontileka unmanned, kungcono futhi kwasenza sakwazi ukwenza inqubo ngeposi.
okulula ukuqonda futhi elula befuna imbuyiselo kusukela nezinqubo
umthengi ezezimali, isidingo guarantors futhi eseduze njengomthetho ojwayelekile.
kuso, futhi ukungena ngemvume izikhathi eziningana e-multiple yesivumelwano, njengoba kuqhathaniswa izinto ezifana isiqinisekiso nokunye okunjalo kwenziwe emva kwathatha isikhathi ukubukeza, inqubo iphuzu ilula kuyiqiniso kanye nezinzuzo. Njengoba
ukuthi kuphela le nqubo elula, ngesikhathi sokuphumula, futhi izici kungaba kwenziwe isicelo in ezifana ngocingo noma nge-Internet. Uma
kule, akukho ukukhathazeka mayelana Barre emndenini nakubangane.
Libuye isici isibe lula futhi buyiselo indlela. Ngaphezu yokwelapha by
iwindi ke ukhokha kusukela ATM esitolo zingagadiwe, ungakwazi ukukhokha esitolo lula ATM Internet Banking eminyakeni yamuva.
futhi ngezinsuku zeviki kunalabo matasa abasebenzi ehhovisi, kuyoba sizikhandle uzizwe ukubuyisela ngaphandle kokuba nesikhathi esanele.
senzalo esikhundleni inqubo ijubane luyanda
Liphathwe njengoba surface kusimo ukusebenzisa
umthengi ezezimali, kuyinto ukuphakama Isilinganiso senzalo. Nakuba kungekho okungathatha isikhundla eseduze
futhi liqinisekisa, ke imisiwe ngesikhathi inani eliphakeme lemali kunokujwayelekile ukuze kuncishiswe ingozi iqoqo.
Ngaphezu kwalokho, uhlangana isimiso ukuba abuyisele e oyinhloko kuqondane and inkontileka isithakazelo, ubelokhu Ezimweni eziningi isikhathi ukuze asule kuba isikhathi eside. Ukubheka nje lemali ukubuyiswa kwemali of
nyangazonke, 3000 yen futhi 5000 yen kanye elincane ukuze, hhayi abambalwa kubantu ukusetshenziswa catapult kakhulu.
Nokho, akusho nayo nemali njengoba buyiselo imizamo eziphuthumayo, ezimweni eziningi ukukhokha lemali ubuncane imali kuphela njalo ngenyanga, kuba uhlobo, njenge-khokha kuphela isithakazelo, futhi wayekholelwa ukuthi ahlale ngaphandle ukunciphisa uthishanhloko . Ngakho
ukuncoma icala, sibambe umkhankaso senzalo 0.
Lona, esimweni salabo ababekwa zokweboleka okokuqala has a kwabasiza ngenyanga yokuqala, zenzalo kusho icebo lokuba sibe 0, kuyinto uhlelo kuqhathaniswa eziyisisekelo ungaphakathi ezezimali umthengi.
Ngokugcina ngisho noma ukubuyiselwa imali ukuthi wahlelwa ngezinga elithile njengoba ayikwazanga kwabasiza ngenyanga yokuqala, ayisekho ngisho ukuthi ukubuyiswa kwemali sekwephuzile, ke uyokwazi ukugwema ingozi isifuthefuthe phakathi quagmire.
Izinzuzo usebenzisa ezezimali
umthengi ukuthi kungaba kwenziwe ukuze ubuyekeze uphinde kwemali kusuka isicelo esikhathini esifushane.
ukuthatha yen ayizinkulungwane eziningana phakathi nosuku ngempela, ingabe kungashiwo ukuthi ukusinda ingxenye maqondana ukuthi.
Ngakolunye uhlangothi ukuthi, ukuthi inani lenzalo isethwe okusezingeni eliphezulu futhi, ukuthi uthishanhloko kunzima ezimbalwa izofakwa ohlwini ngesikhathi sokukhokha. Ukuze ukuboniswa ngisho CM ka
umthengi ezezimali, kamuva ukuze akubi buhlungu, ake azame ukwenza ezinengqondo kungekho uhlelo ukukhokha imbuyiselo.
Ngaphezu kwalokho, watusa ukuba lokhozi ncamashi ukuthi kukhona icebo kube yikho, kusukela umthengi finance ngamunye ikhasi lewebhu ngoba akwenzeki.
Nakaniwa, kungase kube ephelele buyiselo indlela ukukhetha plan yabo siqu. It
ukubuyela ngokuhlakanipha ukuboleka ngokuhlakanipha, ezezimali umthengi uma lokhu kungenzeka kuyosenza abe ally oqinile.
ezihlobene izinzuzo / nemibi zokweboleka imali esebhange